(၁၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၃၄၆၂) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၈၂၀၀) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။ ၁၀.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ ၆.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ
Package No. (2) – 47(T) DPTSC(PTP)/(2019-2020): Design, Supply, Installation and Commissioning of 230 kV Ye and Dawei Substations and Extension of 230 kV Mawlamyine Substation
The Department of Power Transmission and System Control (“the Employer”) invites sealed bids from eligible Bidders for the Design, Supply, Installation and Commissioning of 230 kV Ye and Dawei Substations and Extension of 230 kV Mawlamyine Substation (the “Facilities”). The Facilities are located within Mon State and Tanintharyi region.
Download Link : Invitation_for_Bids(MYD).pdf
၂၃၀ ကေဗွီ နမ့်စန်-မိုင်းပျဉ်း-ကျိုင်းတုံ မဟာဓာတ်အားလိုင်း (၁၅၁.၈)မိုင်၊ ၂၃၀/၆၆/၁၁ ကေဗွီ (၁၀၀)အမ်ဗီအေ ကျိုင်းတုံပင်မ ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ ၂၃၀/၆၆/၁၁ ကေဗွီ (၆၀)အမ်ဗွီအေ မိုင်းပျဉ်းပင်မ ဓာတ်အားခွဲရုံဖွင့်ပွဲ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ၂၃၀ ကေဗွီ နမ့်စန် - မိုင်းပျဉ်း - ကျိုင်းတုံ မဟာဓာတ်အားလိုင်း (၁၅၁ ဒသမ ၈)မိုင်၊ ၂၃၀/၆၆/၁၁ ကေဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီအေ ကျိုင်းတုံပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ၊ ၂၃၀/၆၆/၁၁ ကေဗွီ ၆၀ အမ်ဗွီအေ မိုင်းပျဉ်းပင်မဓာတ်အားခွဲရုံဖွင့်ပွဲနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)သို့ နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စတင်ပို့လွှတ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ် မိန့်ခွန်းပြောကြား
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၂၇.၇.၂၀၂၀)
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၂၄.၇.၂၀၂၀ရက်နေ့မှ ၃၀.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ)
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၁၇.၇.၂၀၂၀ရက်နေ့မှ ၂၃.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ)
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၁၀.၇.၂၀၂၀ရက်နေ့မှ ၁၆.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ)